Ny Vivo Nex 2 dia voamarina tamin'ny fiampangana haingana 44 watt | Androidsis
Herintaona mahery izay taorian'ny Vivo Nex, finday avo lenta avo lenta izay nahavoa ny tsena tamin'ny fakantsary azo esorina, zavatra izay tsy dia fahita firy tamin'izany tahaka ny ankehitriny. Ho fanampin'ity endri-javatra ity dia tonga niaraka tamin'ny fiasa ilay fitaovana Premium, na dia natomboka tamin'ny kinova roa ambany aza: ny iray manana Snapdragon 845 SoC mitovy amin'ilay maodely lehibe, fa kosa manana RAM sy ROM kely fitadidiana ambany ary iray hafa miaraka Snapdragon 710.
Satria efa tanteraka ny tsingerina isan-taona, ny Vivo Nex 2 mbola ho avy. Ity terminal ity dia nantenaina ho lasa ofisialy tamin'ny volana lasa teo, izay tamin'ny fotoana nanombohana ny Nex tany am-boalohany tamin'ny taona 2018, saingy ny vinavinan'ny toetr'andro izay nanamarina fa io no daty fampisehoana azy dia tsy tontosa. Na izany aza, mety ao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia hianatra momba azy io amin'ny fomba ofisialy isika, ary, alohan'ny hitrangan'izany, ny sasany amin'ireo mety ho famaritana azy, toa ny ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha izay hampitaovana, efa fantatsika izy ireo.
Ny maso ivoho fanamarinana 3C any Shina dia nanaiky ny terminal Vivo iray mitondra ny anarana kaody "V1922A". Inoana fa ity smartphone ity dia ilay antsoina hoe Vivo Nex 2, saingy tsy maintsy ekena fa tsy azo atao ny mahazo antoka, amin'izao fotoana izao, dia io no izy. Na izany aza, nanomboka nandrakitra fa manohana fiampangana haingana 44 watt -Teknolojia izay tsy hita amin'ny finday fampisehoana ambany na antonony- antenaina ho iray amin'ny famaritana ny finday avo lenta amin'ny andiany Vivo Nex.
Amin'ny antsipiriany, ny lisitra 3C an'ny Vivo V1922A dia mampiseho fotsiny ny charger V3030A-CN izay miaraka amin'ny famandrihana dia mahatratra hatramin'ny 5V / 2A, 9V / 2A, 11V / 3A ary 11V / 4A. ny iQOO Izy io no telefaona Vivo voalohany manana fanohanana amin'ny famahana haingana ny 44 W ary ny charger-ny dia manana famaritana amin'ny antsipiriany momba ny maodely V1922A, ho an'ity, indrindra indrindra dia ny Marihina fa ny Nex 2 dia hifanaraka amin'ity teknolojia ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Vivo Nex 2 dia voamarina tamin'ny fiampangana haingana 44 watt
Ny finday 5G an'ny Honor dia ho tonga alohan'ny faran'ny taona